Ahoana ny fanaovana sary ny biby tsikelikely sy mora amin'ireto fitaka ireto | Famoronana an-tserasera
Tsy sarotra ny manao sary. Aza manao hadisoana; tsy mora koa ny manao sary tsara. Misy ireo manana 'kanto' bebe kokoa ary ireo izay manao tsaratsara kokoa. Amin'ity tranga ity, ny fomba sy ny filan'ny nofo dia mitaona anao hamorona sary. Ary iray amin'ireo voalohany, ary koa iray amin'ireo mora indrindra "ampiofaninao" miaraka aminao dia ny fianarana manao sary biby. Ny antony dia saika ny ankamaroan'izy ireo dia manana endrika fototra ary, mamantatra azy ireo, manana mihoatra ny antsasaky ny sary vita ianao.
Raha tianao izany mianatra manao sary biby, Na satria tianao izany, satria manan-janaka kely manontany anao ny fomba fanaovana sary azy ireo ianao ary tsy te handiso azy ireo, na hianatra vaovao fotsiny, anio dia hanampy anao hahafantatra izay dingana tokony hataonao ianao hahatratra azy. Angamba ny sary voalohany dia tsy ho tonga tsara, fa ny fikirizana, ny faharetana ary ambonin'ny fampiharana rehetra dia hahatonga anao ho tompon'ny sary biby.
1 Ny lakilen'ny fahalalana ny fanaovana sary ny biby
2 Ahoana ny fanaovana sary ny biby tsikelikely amin'ny endrika geometrika
2.1 Atombohy amin'ny lohany
2.2 Ataovy sary ny vatana
2.3 Midira amin'ny loha sy vatana
2.4 Mifantoha amin'ny loha
2.5 Ampio ny tongotra
2.6 Fafao ny boribory sy ny mahitsizoro
3 Fomba fanaovana sary biby: tarehy
4 Fomba fanaovana sary biby azo tanterahina
5 Ahoana ny fomba hivoahana ny sary biby mankany amin'ny hyper-realistic
Ny lakilen'ny fahalalana ny fanaovana sary ny biby
Araka ny efa nolazainay taminareo teo dia mandalo ny fahafantarana ny fanaovana sary fantaro hoe inona ireo endrika fototra amin'ireto. Ary io, raha mandinika ireo biby ianao dia afaka mampahatsiahy anao ny endrika geometrika izy ireo. Ohatra, ny lohan'ny saka dia mety ho boribory; ny vatana, boribory boribory; ary ny rambony dia efa-joro efa ela. Amin'ireo endrika voafetra ireo dia azonao atao ny mamorona tsipika mamaritra ny vatan'ny biby toy izany. Ary noho izany, mahazoa valiny.
Araka an'i Pierre Pochet, "Toy ny vatan'olombelona, ​​ny vatan'ny ankamaroan'ny biby dia azo zaraina ho endrika tsotra". Ary inona ireo endriny ireo? Eny, ny fototra indrindra: toradroa, telozoro, boribory ary mahitsizoro. Indraindray koa boribory boribory lavalava no hiditra.
Avelanay eto ianao sary biby vitsivitsy vita amin'ny endrika geometrika mba hanomezana anao hevitra hoe ahoana izany. Ary io dia toy ny olona iray dia mizara amintsika ny fomba fanaovana sary azy ireo koa izy ireo.
Fanalahidy iray hafa izay tsy maintsy raisinao hikaoty ny fananana referansa. Raha ny momba ny fanaovana sary ny biby dia azo atao amin'ny fomba samy hafa be ireo, fa rehefa miatrika sary ianao dia mila manana andinin-tsoratra momba ny fomba itiavanao ilay sary. Amin'izany dia tsy milaza izahay fa handika iray efa vita ianao, saingy hitanay fa fototry ny fahalalana izay tsy maintsy apetrakao amin'ilay sary ka tena mitovy amin'ny biby tadiavinao izany.
Ahoana ny fanaovana sary ny biby tsikelikely amin'ny endrika geometrika
Alao an-tsaina hoe tsy maintsy manorata alika, saka, omby ianao ... Fa tsy hainao ny manao azy. Saingy, ao an-tsainao tokoa fa manana ilay sary ianao; ny olana dia ny hamerina azy amin'ny taratasy. Ary eto izahay manome anao ny dingana tokony hataonao:
Atombohy amin'ny lohany
Mba hanaovana izany dia manorata faribolana. Ity dia tokony ho ny habe tianao ho sary. Ataovy ao an-tsaina fa tokony ho lehibe kokoa izy raha lehibe ilay biby tarihinao. Miorina amin'ny refy "tena izy" an'ny biby. Ohatra, raha manao elefanta ianao dia ho lehibe kokoa ny faribolana noho ny hoe manao totozy ianao.
Ataovy sary ny vatana
Manaraka izany dia mila ny vatana ianao. Matetika izy io dia atao amin'ny kianja, na dia misy zoro boribory aza (toy ny boribory mihinjitra).
Midira amin'ny loha sy vatana
Raha mbola tsy nandoko ny mahitsizoro akaikin'ny faribolana ianao, dia ilaina ny manatevin-daharana azy amin'ny tsipika izay manahafana na ny endrika na ny volon'ny biby. Tena mahitsy izany satria tsy mila 'manao azy ho tsara' ianao, fa atambaro fotsiny ireo endrika roa amin'ny voalohany.
Mifantoha amin'ny loha
Ataovy sary ny vavony, vatan-kazo, orona, sofina ... Izany no toetra mampiavaka indrindra ny biby nofidinao. Aza soratana amin'ny antsipiriany bebe kokoa anefa, vonjeo ireo farany.
Ampio ny tongotra
Ataovy aloha ny eo aloha ary avy eo ny aoriana. Noho izany, ireo voalohany ireo dia ho toy ny referansa hanamboarana ny lamosina (satria ny fananana ny ampahan'ny lohany dia mora kokoa hahalala ny halavany sy ny sakany.
Fafao ny boribory sy ny mahitsizoro
Ankehitriny rehefa manana ny fototra ianao, dia afaka manohy mamita ilay sary, ary midika izany hoe manintona ny «accessories», na ny rambony, ny volony, ny maso ...
Fomba fanaovana sary biby: tarehy
Ny fianarana manintona tarehy biby dia, tsy isalasalana, no tsotra indrindra, indrindra ho an'ireo ankizy kely. Ary saika ny biby rehetra dia azo sintomina amin'ny endrika geometrika, na boribory, toradroa, telozoro ...
Maka azy ho fototra, afaka manangana endrika samihafa ianao. Mamela ohatra vitsivitsy izahay.
Dingana hanoritana endrika biby manana endrika geometrika
Azavainay eto ambany ny fomba fanaovana sary biby, tarehy manokana, mba ho hitanao fa izany no mora azo indrindra:
Voalohany, manaova sary boribory na toradroa.
Eo ivelan'io dia apetraho ovaly roa izay ho sofin'ny biby. Arakaraka izay apetrakao no ho lehibe kokoa na kely kokoa ireo sofina ireo.
Manaova tsipika toy ny hoe mizara roa ny antsasaky ny boribory na ny toradroa. Manorata boribory kely eto ambanin'io tsipika io. Izay no ho oron'ny biby anao. Eo ambonin'ilay andohalambo dia apetraho ny mason'ilay biby.
Izao dia mila mametraka ny vavanao fotsiny ianao.
Miankina amin'ny biby nofidinao, ireo dingana ireo dia ho lava kokoa na ho fohy kokoa, satria raha vao manana ny fototra ianao dia mila mifantoka amin'ny antsipiriany mba hanomezana azy ny endrika tianao hotratrarina.
Fomba fanaovana sary biby azo tanterahina
Rehefa mianatra manao sary biby azo tanterahina dia tadidio fa na dia mety hanampy anao aza io voalaza etsy ambony io, dia mbola "fototra" ihany io, ary ny sary azo tanterahina dia mitaky fandosirana lavitra kokoa. Amin'ity tranga ity dia tsy ny endriny ifotony izay tokony hamboarinao fa ny anatoman'ny biby.
Ohatra, raha ny tianao dia ny manintona alika azo tanterahina dia tsy maintsy fantatrao ny toetrany teo aloha. Fantatrao ve fa manana taolana 321 izy io? Ary ny vatanao dia mizara telo, samy manana ny mampiavaka azy?
Manokana, tsy maintsy jerenao ny:
Eo an-doha, izay tsy hitovy arakaraka ny hazakazaka nofidinao hisarihana. Ao no tokony hamafisinao
Ao amin'ny vatana, tsy izay ihany no lamosina, rump ary rambony, fa koa ny ampahany amin'ny vozona.
Ny tendrony, ny eo aloha ary ny any aoriana.
Ahoana ny fomba hivoahana ny sary biby mankany amin'ny hyper-realistic
Tsy azo ihodivirana ny fitiavan'ny sary izay toa tonga amin'ny fiainana, izay tena zava-misy ka mety ho sary marina mihitsy aza. Fa ny fankanesana any dia mila fanoloran-tena be. Ka raha ny hahatratra ireo vokatra ireo no tanjonao, ny tsara indrindra azonao atao dia ny manazatra sy mianatra mafy.
Nanomboka nanao zavatra hafa ny mpanakanto rehetra. Amin'ity tranga ity dia azonao atao mianatra manao sary ny biby fototra satria, rehefa mahafehy ny teknika ianao, ampitomboy ny fahasahiranana Mandra-pahatonganao izay tadiavinao, ireo sary azo antenaina izay hampiaiky volana ny rehetra.
Ireo dia mifototra amin'ny antsipirian'ny biby tsirairay, mba hitondra "fiainana" amin'io sary io. Fa, ho an'izay, ilaina ny mianatra aloha ny fototra handrosoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fomba fanaovana sary biby